Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Hanomboka amin'ny 21 Oktobra ny Global Film Film Festival
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Vaovao Mafana Oganda • Vaovao isan-karazany
Misokatra ny 21 Oktobra ny Global Film Film Festival
GTFF, fetibe fizahan-tany momba ny fizahantany voalohany indrindra eran-tany dia novokarina hatao hanohanana ireo toerana fizahan-tany sy toekarena eo an-toerana miankina amin'ny fizahan-tany.
Ny GTFF dia novokarin'ny mpitarika ny fizahantany sy ny indostrian'ny sarimihetsika.
Ny GTFF dia mankasitraka mpamokatra sarimihetsika iraisam-pirenena sy famokarana horonam-peo izay manambatra sy mampandroso ny fahatongavan-tsoa eran'izao tontolo izao.
Ny ampahany amin'ny vola azo avy amin'ny GTFF dia zaraina amin'ny fototra mihetsika vonona hiaro ny fitsipiky ny fizahan-tany maharitra.
Ny Global Tourism Film Festival (GTFF) dia Festival Film Film mamaky tany an-tsehatra mampiseho ny horonantsary izay manana fahefana hanentana ny saina momba ny anjara toerana lehibe ilain'ny fahombiazan'ny sinema sy fahitalavitra. GTFF, fetibe fizahan-tany momba ny fizahantany voalohany indrindra eran-tany dia novokarina hatao hanohanana ireo toerana fizahan-tany sy toekarena eo an-toerana miankina amin'ny fizahan-tany.
GTFF manaiky ny mpamokatra sarimihetsika iraisam-pirenena sy ny famokarana horonam-peo izay mampiditra sy mampandroso ny fahatsiarovan-tena amin'ny toerana maneran-tany. Notarihan'ny fanambarana iraka mahery vaika, ny hetsiky ny GTFF dia ahitana atrikasa fanaovana indostrian'ny sarimihetsika ary koa seminera hijerena fizahan-tany maharitra; manentana ny mpijery handray hetsika fitehirizana tsara.
Ny 2021 GTFF Virtual Edition dia novokarina ho fiaraha-miasa sy fanohanana ny fizahantany Netherlands.
Ny iraky ny Fetiben'ny sarimihetsika momba ny fizahan-tany eran-tany dia:
Manaiky sy manome valisoa ireo mpanao sarimihetsika fizahan-tany manan-talenta.
Ny fampisehoana ireo sarimihetsika sy famokarana ampahibemaso momba ny toeran'ireo mpizahatany sy ny vokatra.
Hampiroboroboana ny fironana farany amin'ny fanaovana sarimihetsika fizahan-tany.
Mampitodika ny fahalianan'ny orinasan'ny fizahantany sy ny orinasa mpamokatra amin'ny vokatra sarimihetsika fizahan-tany.
Manentana ireo matihanina amin'ny indostrian'ny sarimihetsika hanodina ny ezak'izy ireo ary hahay manokana amin'ny fanaovana sarimihetsika fizahan-tany.
Misarika ny sain'ny orinasa mpamokatra sarimihetsika, haino aman-jery, fizahan-tany ary ny besinimaro amin'ny sehatra iray.
Mamorona fepetra ho an'ny atiny fanentanana tena mahomby.
Ny GTFF dia novokarin'ny mpitondra fizahan-tany any Kanada sy Etazonia ary mpitarika indostrian'ny sarimihetsika izay nanjary nalaza fiaviana lehibe tamin'ny sarimihetsika sy fizahan-tany, anisan'izany ny fanendrena ireo komisiona mifehy ny sarimihetsika sy fizahantany.
Manomboka amin'ny premieres eran-tany ka hatramin'ny lanonana fankalazana, manomboka amin'ny fizahana ka hatrany amin'ny tambajotram-pamokarana mahomby, manomboka amin'ny fifaninanana mahery vaika entin'ireo mpitsara iraisam-pirenena, hatramin'ny mpandahateny lehibe, ny fotoana hanatanterahana ny filàn'ny mpandray anjara hahatakatra tsara kokoa ary ho ampahany amin'ny fironana farany amin'ny fanaovana sarimihetsika dia betsaka.
Ny sehatra ho an'ny daholobe, ny sarimihetsika ary ny fizahan-tany dia hanana alalana vaovao sy vaovao voalohany ihany koa avy amin'ny tompon'andraikitra fizahan-tany iraisam-pirenena miaraka amin'ny mombamomba ny toerana misy ifandraisany amin'ny sinema sy sarimihetsika.
Ho fanampin'ny Festival Film Selections, 2021 GTFF dia manome fidirana amin'ny seminera indostrialy malalaka sy atrikasa atolotry ny guru indostrialy. Ny seminera ho an'ireo mpanatontosa sarimihetsika dia misy ny fanangonam-bola ho an'ny famokarana, ny fanaovana dokambarotra an-tsary, ny fizarana ary ny fananganana fototra. Atrikasa fampidirana miresaka fandrakofana horonantsary, fanoratana an-tsary ary fampisehoana an-tsary ho an'ny vondrom-piarahamonina sarimihetsika. Seminera itodihan'ny Netherlands sy Birao fizahantany any Oganda dia hitarika sy hanidy ny hetsika vaovao.